ထိုးချင်ဦး ဟဲ့ တက်တူး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ထိုးချင်ဦး ဟဲ့ တက်တူး
ထိုးချင်ဦး ဟဲ့ တက်တူး
Posted by MAUNG on Sep 4, 2013 in My Dear Diary | 41 comments
အေးဗျ .. တက်တူး ကို စ စိတ်ဝင်စားတာက တော့ ကိုးတန်းကျောင်းသားလောက်ထဲကပါ။
ဒါပေမဲ့ တစ်ကယ်ထိုးမယ်၊ မထိုးဘူး ဆုံးဖြတ် လို့မရတာတော့ အကြာကြီးဘဲ။
ကျွန်တော့ မေမေ ပြောထားဘူး တာတစ်ခု ရှိတယ်။ ဆေးမှင်ကြောင် ထိုးတဲ့ နေ့ အိမ်ပြန်မလာနဲ့တဲ့ ။ တစ်ခါမှ အဲလို မပြောဘူးတော့ လန့် တာတော့ အမှန်ဘဲ။
ဘယ်လောက် တက်တူး ကိုရူး လဲ လို့မေးရင်တော့ ကိုယ့်ကိုယ် ကို ပြောမပြတတ် အောင် မိုက်မိုက်မဲမဲ ရူးတာလို့ဘဲ ဝန်ခံရ မှာဘဲ ။
လမ်းသွားရင်း လာရင်း ကောင်မလေး ချောချော လေးတွေမြင်ရင် သာ လှည့်မကြည့် နေရမယ် ။ တက်တူး လန်းတာလေး များတွေ့ရင် သမင် လည်ပြန်ရုံ မက ကြက်ကြီး လည်လိမ်ထား တာထက် ဆိုး ဦးမယ် ။
နောက် ..နဲနဲ ဟို သွားဒီ သွား၊ သွား တတ်လာ တော့ တက်တူး ဆိုင်တွေ့ရင် ဝင်ငေး ၊ စပ်စု ၊ ဘယ်လောက် ဆိုးလဲ ဆို ဘုရား ပွဲဈေး တန်းမှာ တက်တူး ထိုး တာမြင် ရင်တောင် ရှေ့ဆက် မသွားဘဲ၊ တစ်မေ့ တစ်မော ဝင်ငေး တာ၊ အဲ့လောက် ။
ဆယ်တန်း အောင်ပြီးကာစ က မန်းလေးမှာ ခဏသွား နေဘူးတယ် ။ ရပ်ကွက် ထဲမှာ ခင် နေတဲ့ ရွယ်တူ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် က သူ တက်တူး ထိုးတတ်တယ် တဲ့ ။ ဘာ ပုံလဲ ဆိုတော့ ပင့်ကူ နက်တဲ့ ။ ဘယ်မှာ လဲဆိုတော့ လက်ခလယ် မှာ ။ မင် က တော့ မီးဖို ထဲ ကကျပ်ခိုးနဲ့ အုန်းဆီ ရောထား တာ၊ စုတ် တံက ပန်းချီဆွဲတဲ့ စုတ်တံ ခပ်ရွယ် ရွယ် ကိုဖြတ်ပြီး အပ် သေးသေး သုံးချောင်း ကို အပ်ချည် နဲ့ စီးထားတာ ။ တောက် ကျိုးနဲ ၊ နေပါ ဆြာ ရယ် ။ ကျေးဇူးလဲတင် ပါတယ် ဆိုပြီး မနည်း တောင်းပန် ရတယ် ။ အတူ ရှိနေတဲ့ နောက်ထပ် သူငယ်ချင်း ရဲ့ သူငယ်ချင်း ကတော့ လက်တည့် စမ်း ခံ လိုက်တာ ၊ အံမယ် သိပ်မဆိုးပါ လားဟ လို့ တွေးလို့ မဆုံး နှစ်ရက်မြောက် တဲ့နေ့မှာ သူ့ဘိုးတော် တွေ့သွား လို့ ပင့်ကူနက် ကို ဓားနဲ့လိုက် လှီးတာ (တစ်ကယ် လှီးဖို့ လိုက်တာ) အပြေး ကောင်းပြီး ၊ ရပ်ကွက် က အဆွဲ မြန်တာတောင် လှိမ့် ပိန့်ပြီး မြေကြီး ပေါ်မှာ အကန် ခံ ရသေးတယ် ။ မျက်နှာ တွေကို ဖူးယောင် လို့ ။
အဲဒါ မျိုးတွေမြင်ထားတော့ ငါ့ အလှည့် ကျလဲ အဲ့လို ဆော်ပလော်တီး ခံရ ရင် ဒွတ်ခဆို ပြီး ကြောက်တာလဲ ပါတာ ပေါ့ ။
ဒီလို နဲ့ ဘဲ တက်တူးဆိုင် တွေ့ရင်ဝင်ငေးလိုက် ။ တက်တူး ပုံ လေးတွေ လိုက်ရှာလိုက် နဲ့ တော် တော်ကြာ သွားပါတယ် ။
အံမယ် … ရောက်ပြီး မထိုး ဖြစ်ခဲ့တဲ့ တက်တူး ဆိုင် တစ်ဆိုင်က စာလေး တစ်ကြောင်း များသတိ ရမိသေးတယ် ။ ဘာတဲ့ ….Good tattoos are not cheap and cheap tattoos are not good. ဆိုဘဲ ။ ရေးထားတဲ့ စာ နဲ့လိုက်အောင် လဲပိုက်ဆံ တောင်း ပါတယ်။
တစ်ခါ များတော့ ခေါက်ဆွဲ သွားစားရင်း၊ ခေါက်ဆွဲ ကြော်တဲ့ စားဖိုမှူး ရဲ့ လက်မောင်း ပေါ်က အရုပ်တွေ ကိုကြိုက် လွန်းလို့ တောင်းပန် ပြီးမေးကြည့်တော့၊ မောင်မင်းကြီး သား က ခေါက်ဆွဲ ကြော် နေတာတောင် ရပ် ပြီး ရှိသမျှ အရုပ်တွေ အကုန် လှန်ပြရုံ မက ၊ သူထိုး ခဲ့ တဲ့ဆိုင်ကို စိတ်ရှည် လက်ရှည် ညွန် ပေးလိုက်ပါတယ် ။
တိုတို တုတ်တုတ် ပြောရရင် ချကွာ ဆိုပြီး တက်တူး ထိုး ဖြစ်သွားရော ဆိုပါတော့ ဗျာ။ အဲ ….သွားထိုး တဲ့ ဆိုင်က ကျွန်တော် ခုနေတဲ့ နေရာကနေဆို ရန်ကုန် နဲ့ ပဲခူး သာသာလောက် ဝေးတယ် ။ စုစု ပေါင်း ခြောက်ခေါက်သွား ခဲ့ တယ် ။ တတ်နိုင်ဘူး ၊ လုပ်မှတော့ မထူးဘူး ဆိုပြီး စွတ်တင်ခဲ့ တာလေ ။
မှန်တာကို ဝန်ခံရ ရင် တက်တူး ဆိုင် ကိုခြေဦး လှည့် လိုက်ထဲက မေမေ့ ပြောခဲ့တဲ့ စကားသံ ကြားယောင် ပြီး၊ မေမေ့ မျက်နှာ ကိုမြင်ယောင် မိတယ်။ စိတ် ထဲကနေ တောင်းပန် ကန်တော့ မိပါတယ် မေမေ ။
ကဲ..ကောက်ကြောင်း စ ထိုးပြီ လဲဆိုရော အောင်မငီး နာတယ် ဟ။ မနာဘဲ နေမလား ဗျာ။ အသား ထဲ ကို အပ်နဲ့ ခွဲပြီး သေရာပါ မဲ့ ဆေးမှင် တွေ ထည့်နေတာ ။ တက်တူး ထိုး လို့ မနာပါ ဘူး ဆိုပြီး ထိုးဘူး တဲ့လူတွေပြောတာ လိမ်နေတာ ။
ကျွန်တော် ပြောတာ မယုံရင် ထိုးကြည့် လိုက်လေးD
အောက် ကပုံ က ကောက်ကြောင်း ဆွဲပြီးသွားတုံးကပုံ ။
ထိုးပြီးတော့ လဲ၊ တစ်နေ့ သုံးခေါက် ရေနွေး နဲ့ဆေး၊ ဆေးလိမ်း နဲ့ အတော် အလုပ်ရှုပ်တဲ့ တတ်တူး ဗျာ။
ကောက်ကြောင်း ပြီးသွား တော့ အရောင် ထည့်၊ ညွတ်ချွပ်ဖျား နာတာ ဘဲဗျ ။ အဲ.. ကောက်ကြောင်းဆွဲတုန်း က လို အပ်နဲ့ မဟုတ်တော့ နာတာချင်းတော့ မတူဘူး ဗျ ။
အောက် ကပုံ က အရောင် စထည့် တဲ့ ပုံ…
ပထမ စထိုး တုန်းက Koi Fish ကိုလက်မောင်း အပေါ် တစ်ဝက် ဘဲထိုး တာ။ ကြည့် ရတာ ပြောင်စပ်စပ်နဲ့ မို့ လက်မောင်း တစ်ခုလုံး ပါတ် လိုက်တယ်၊ အေးရော
အောက် ကပုံက အားလုံး ပြီးကာနီး မှန်ထဲကပုံ ကိုရိုက်ထား တာ။
ခု နောက်ဆုံးပုံ ကတော့ အားလုံး ပြီးသွားမှရိုက် တာ။ နောက်တစ်ခေါက် မသွားနိုင် လို့ အပွိုင်မဲန်း နှစ် ခေါက်စာ ကို တစ်ထိုင်ထဲ အပြီး ထိုး လိုက်တာ မေးတွေတောင်ကားပြီး တော်တော် အီစိမ့်သွားတယ် ။
စကား မစပ်၊ ပြီး ခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာ ကအိမ်ပြန်ဖြစ် တယ်။ ခရီး ရောက်မဆိုက် မေမေ က မဆူ ပေမဲ့ ဆေးမှင်ကြောင် တွေ နဲ့ သားရဲ့ လက်မောင်း ကို သေချာ လာကိုင် ကြည့် ပြီး ဘာမှတော့ မပြော ဘူး။
ဒါ ပေမဲ့ မေ မေ့ မျက်နှာ မကောင်း ဘူး
ဒီ ပုံက အားလုံး အပြီးထိုး ပြီးတဲ့ ပုံ ။
ဘာ ရေး ရမှန်းမသိ လို့၊ ထုံးစံ အတိုင်းပေါ့ပေါ့ပါး ပါး ဖြစ်မယ် ထင်တာ လေးရေးတင်လိုက် တာပါ ။
အားလုံး ကျေးဇူးပါ ။
နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာက နောက်မှ ကြည့်ရှင်းကြတာပေါ့။
ဒီရွာထဲမှာလည်း တက်တူးဆရာ တစ်ယောက်ရှိတယ်။
မှန်လိုက်လေ KZ ရေ
ရွာထဲက ကရင်စီသွပ် ဆိုတဲ့တယောက်လည်း
သူ့ သင်္ဘောလိုင်းက လည်း ကြပ် မထိုးရလဲမနေနိုင် ဆိုတော့
လူမမြင်အောင် တင်ပါးမှာ ထိုးသတဲ့ ..ထိုးတာက သူသိပ်ကြိုက်တဲ့
မင်းသမီး ယုစ့်သန်ဒါတင် ရဲ့ နာမည် အတိုကောက်ပါတဲ့…
ရန်ကုန်က အမျိုးတွေရေ ..ကရင်စည် ရန်ကုန်ရောက်ရင် – င်သာ လှန်ကြည့်ပါတော့
ဟား ဟား .. လှန် တော့ မကြည့် ပြစေနဲ့ ဗျာ
သမိုင်းလှန်လို့ရတယ်..။ အင်္ဂလိပ်တွေမှတ်တမ်းထားသွားတာမို့.. သေချာလောက်ပါတယ်..
အနည်းဆုံးတော့.. နိုင်ငံတကာတိုးရစ်တွေ.. စိတ်ဝင်စားပြီး.. မြန်မာပြည်လာ.. တက်တူးထိုးကြရင်.. မြန်မာတွေအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းပေါ်လာမယ်ထင်ကြောင်း..
အေးဗျာ …သဂျီးတို့ ဆို ပေါင်မယ် ထိုးကွင်းအပြည့်နဲ့
သလုံးမှာ ကြောင်အတက်အဆင်း လက်မောင်းမှာ ယက္ခ
လက်ဖျံကျ ဂုမ္မာန် နံပါးမယ် ဇာမဏီနဲ့ ကျောမှာ နဂါး
ငါ့အဘိုးသည် ၊ ထိုးကွင်းမင်ကြောင် ၊ ရုပ်တစ်ထောင်နှင့် ။
အဘိုးသားသည် ၊ ကျားကနှစ်ကောင် ၊ ကြောင်ကနှစ်ကွင်း ၊ တက်အဆင်းနှင့် ။
ငါ့တွင်တမူ ပေါင်ဖြူဖြူကြောင့် ၊ သူအိုဆံကြား တစ်ချောင်းသွားနှင့်
ကိုလေး(အင်းဝဂုဏ်ရည်) ၊ ၁၉၃၆။
နာဇီ တွေ တစ်ချိန်က အရုပ်ရှိ တဲ့ လူတွေ သတ်၊ အရေခွံ ဆုတ် ပြီး မီးအုပ် ဆောင်း လေးတွေ လုပ် ဆိုဘဲ…
ဟီ ဟိ တက်တူးထိုးဖို့တော့ ယောင်လို့တောင် စိတ်မကူးမိဘူး…
အသားနာမှာလည်း ကြောက်တယ်၊ နောက်ပြီး အသမဲမို့ အရုပ်ထင်မှာ မဟုတ်…
နာ တာမှ ယား ယားပြီးနာတာ ဦးကျောက် ရေ…
အောင်ရဲလင်းနဲ့ တဲ့ ဗလကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသကာလ
ကျွန်တော့ သူဋ္ဌေး ကတော့ တက်တူးရှိ ရင် အလုပ် မခန့် ဘူး ဆိုဘဲ
တက်တူးထိုးတဲ့ပုံပေါ်မူတည်ပြီး အရွယ်သုံးပါးလုံးနဲ့ လိုက်ဖို့တော့လိုတယ်ထင်တယ်…
မိန်းကလေးဖြစ်လို့လားမသိဘူး.. တက်တူးကိုမကြိုက်ဘူး.. ကိုယ့်အသားလှတပတလေးကို အနာလည်းခံရအုန်းမယ်..အပျက်စီးလည်းခံရအုန်းမယ်..
အမှန် အတိုင်းဝန်ခံရရင် ထိုးပြီး ကာစက ကိုယ့်လက်မောင်း ကိုယ် နှမျောသလို ဖြစ်မိတယ်
ဒီဆြာလည်းပန်းသီးချစ်သူပေပဲ… ရွာထဲက ပန်းသီးချစ်သူတွေဘွပြောင်းကုန်ပြီးဆိုလား.. တက်တူးနဲ့ဆိုတော့သိပ်မနိမ့်ပေဘူး
မိုက်အိ …. အဘောကျအိ ….
စကား မစပ် ၊ လမ်း မှာ Koi fish တက်တူး ကြီးနဲ့ ကျွန်တော့ ကို တွေ့ ရင် ရွာသူ ရွာသား များ နှုတ်ဆက်ကြပါ နော်
ပြီးရင် မုန့်ဝယ်ကျွေး ချင်လဲ ရပါတယ်
အဲဒီ ဝန်ခံချက်စကားလေး က တကယ်ကို စေတနာ ရသမြောက်ပါတယ်။
Cheryl Cole တင်ပါးက နှင်းဆီ ပန်းပွင့် ကရော အစစ် ဘဲလားမသိ။
လှတော့အတော်လှတာ။ အတော်ကိုလဲ နာမှာ။
တကယ်တော့ ခုခေတ် လူတွေ ထိုးတဲ့ တတ်တူးနဲ့ ရှေးမြန်မာကြီးတွေ ထိုးတဲ့ ဆေးမင်ကြောင် သိပ်တော့ မတူဘူးဗျ။ ဟိုတုန်းက ရှေးမြန်မာကြီးတွေ ထိုးတဲ့ ဆေးမင်ကြောင်က ပေါင်တခုလုံးမှာ အပြည့်ထိုးတာ။ နာတာလည်း အခုခေတ်ထက် အဆပေါင်းများစွာ နာတယ်လို့ ပြောတယ်။ သူတို့ခေတ်က ယောကျာင်္း ဆိုတာ အော်ရင် သိက္ခာကျတယ်ဆိုလို့ မအော်မိအောင် ပါးစပ်ထဲမှာ ကွမ်းသီးလုံးကြီး ငုံပြီး အထိုးခံတာ ကွမ်းသီးဟာ ပြီးရင် ကိုက်ရလွန်းလို့ အစိတ်စိတ် အမွှာမွှာတောင် ဖြစ်နေတတ်တယ် ဆိုပဲ။ ထိုးတဲ့ စုတ်ကလည်း လက်တတောင် လောက်ကြီး ရှိတယ်တဲ့။ အဲဒါကို စုတ်ထိုးတဲ့ စုတ်ထိုးဆရာက လက်နဲ့ကိုင်ပြီး တချက်ချင်း ပေါင်ကို ထိုးစိုက်တာ။ ပြီးတော့ နှစ်ဘက်စလုံးကို တပြိုင်နက် ထိုးလို့ မရဘူး။ တပေါင်ထိုးပြီးရင် အဲဒီဒဏ်ရာကြောင့် ဖျားနေတတ်လို့ နောက်ရက်နည်းနည်း ခွာပြီးမှ နောက်တပေါင် ဆက်ထိုးရတာ။ ခုခေတ်သာ အဲဒီလို ဆက်လုပ်ရမယ်ဆို မလွယ်ကျောပဲ။
အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ် သိသလဲဆိုရင် ကျနော့်အဘိုးရဲ့ ပေါင်မှာ ထိုးကွင်းအပြည့်ရှိတယ်။ သူ့ထက် နည်းနည်းကြီးတဲ့ အဘယွန်းဆိုတဲ့ အဘိုးကြီးလည်း အဲဒီလို ထိုးကွင်းတွေ အပြည့်ပဲ။ ငယ်ငယ်တုန်းက မြင်ဖူးတယ်။ သူတို့ပြောတယ်။ နာလိုက်တာမှ အသည်းခိုက်အောင် နာဆိုပဲ။ တခုတော့ ရှိတယ်ဗျ။ ရှေးမြန်မာကြီးတွေ ခံနိုင်ရည်ရှိတာတို့ သတ္တိကောင်းတာတို့ဟာ ဒါကြောင့်များလားပဲ။ အသက်တွေ ကြီးပြီး အဘိုးကြီးတွေ ဖြစ်နေတာတောင် သိပ်သန်မာတာတော့ အမှန်ပဲ။
နောက် အဖေတို့ ခေတ်လောက်မှာ ခေတ်တော်တော် မှိန်သွားပါပြီ။ သိပ်မလုပ်တော့ပါဘူး။ အဘိုးတို့ထက်စောတဲ့ ခေတ်တွေက ပိုဆိုးတယ်တဲ့ဗျ။ အဲဒါတော့ စာထဲမှာပဲ ဖတ်ဖူးတယ်။ ယောကျာင်္းတိုင်း ထိုးကွင်း မထိုးမနေရပဲ။ အသားအနာ မခံနိုင်လို့ မထိုးတဲ့ ရှားရှားပါးပါး တယောက်တလေကတော့ ခါးတောင်းကျိုက်ဖို့ မစဉ်းစားနဲ့တော့တဲ့ဗျို့။ မိန်းကလေးတွေကပါ အိမ်ထောင်ဖက် အဖြစ် အဲဒီလိုလူမျိုးကို မစဉ်းစားတော့ဘူးဆိုပဲ။
ခုခေတ်မှာ တတ်တူးထိုးတယ် ဆိုတာက လက်တွေ ဘာတွေ အကုန်လျှောက်ထိုးတာဗျ။ နောက်ပြီး စက်နဲ့ ဆိုတော့ နာတယ်ဆိုပေမယ့် အဲဒီလောက်တော့ မနာလောက်တော့ဘူး။ ဟိုးခေတ်တုန်းက ဆေးမင်ကြောင် ထိုးတာက ဆိုင်းဝိုင်းတောင် ပါတယ်တဲ့။ အဲဒီမှာ သတ္တိကောင်းတဲ့ လူက အသံတချက်မှ မထွက်ဘူးဆိုရင် ဆိုင်းဝိုင်းက တခါတလေ ဘီလူးဆိုင်းတွေ ဘာတွေ တီးလိုက်တော့တာတဲ့။ အဲဒီမှာ ဆေးထိုးတဲ့ စုတ်ဆရာကလည်း ဘီးလူးကကပြီး ခုန်ခုန်ပြီးတော့ကို စုတ်ကြီးနဲ့ ပေါင်ကို တချက်ချင်း ပေါက်တော့တာဆိုပဲ။ ပြောရင်းနဲ့ အသည်းယားလိုက်တာ။
ဟုတ်တယ်ဗျ။ လက်မောင်း အတွင်းသား အသားနု တောင်အတော် နာတာ ။ ပေါင် ပါတ်လည် ထိုးကွင်းဆို တော့ ဗျာ စဉ်းစား သာကြည့် ။ ကျွန်တော့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် တော့ ထိုးထား တယ်၊ စက် နဲ့ဟုတ်ဘူး စုတ် နဲ့ ၊ တော် တော် အကြမ်းခံ ပြီး ပေပေ တေတေ နေတဲ့ကောင် တောင် တစ်ဖက် မပြီးဘူး၊ ဖျားတောင် ဖျား လို့ ဆေးကု ယူရတယ် ။ နာ မှာဆိုးလို့ အရက် သောက်၊ ရဲဆေးတင် တက်တူး ထိုး တဲ့သူ တွေလဲ တွေ့ဘူး တယ် ။ ဟား ဟား ဟာသ ဗျာ။ အရုပ် လဲထိုး ချင်သေး၊ နာ မှာစိုး လို့အရက် သောက်ရတယ် လို့ဗျာ။ ပဲခူး ဘုရားကြီး ဖက်မှာ ဆရာ တစ်ယောက် ပေါင် ကိုထိုးကွင်း ထိုး တာ ပွဲပေး၊ ဖျာလိပ် ပါတ် ပြီးကိုင် တာ ဆိုဘဲ။ ထိုး ကွင်း တစ်ဖက် မ ပြည့် သေးဘူး၊ မျော့သွား လို့ မနဲ နှာနှပ်ယူရတယ် တဲ့ ။ ဗမာ့ ရိုးရာ ထိုးကွင်း က ထိုးကွင်း ထဲ ကိုအကောင် တွေဖြေ့ ရသေး ဆို…..
ကျုပ် ကတော့ လက်မှာ ထိုးတာ ရိုးလို့
ခါးကြားမှာ တက်တူး ထိုးထားတယ် …
ဂဠုန်ရုပ် ခပ်သေးသေးလေးပါပဲ ….
ကြုံရင် ရိုက်ပြီး တင်အုံးမယ် ….
ခညား တက်တူးကြီးက လှတော့ လှတယ်
ဒါမယ့် နည်းနည်း ရှုပ်သွားတယ်လို့ မြင်မိတယ်ဗျ ….
ဆေးမှင်စုပ်ထိုးပြီးရင် ပြန်ဖျက်ဖို့က လွယ်တော့ဘူးဗျို့ ….
ဟုတ်ပ ကိုအံစာ ရေ။ ဒါကြောင့် ရှေးလူကြီး တွေ ပြောတာကိုး၊ အိမ်ထောင် မှူ့၊ ဘုရားတည်၊ ဆေးမှင်ရည် စုပ်ထိုး ၊ဤသုံးမျိုး နောင်ပြင်ရန် ခက်သည့် အမျိုး ဆိုပြီး။
ဘာပဲပြောပျော် ကော်မန့် အတွက်ကျေးဇူး ပါဗျာ
တက်တူး က လူကောင်ထွားပြီး ဗလတောင့်မှ ကြည့်လို့ကောင်းတာ။ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မထိုးရင် တော့ အကောင်းဆုံး လို့ထင်တယ်ဗျာ။
မကောင်း တာတော့အမှန် ကိုရဲ ရေ။ အဲဒီ မကောင်းတာကြီး ကို ပိုက်ဆံ အကုန်ခံ အသားအ နာခံ သွားကြိုက်မိတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ် ကို တစ်ခါတစ်ခါ လဲနားလည်ရ ခက်သားဗျ
Hnin Thae Phyu says:
မိုက်တယ် .. ကိုယ်သေရင် ဒါလေးတွေပဲ ကိုယ်နဲ့ အတူပါသွားတာ. (နောက်တာ)
တက်တူးက ဘော်ဒီ ဆိုဒ်တောင့်တောင့် အသားဖြူဖြူ လူအကြီးကြီးတွေနဲ့ဆို တအား ကြည့်ကောင်းတယ်။
နောက် အရွယ်လေးကျလာ အသားအရေတွေ ရှုံ့လာ ရွဲလာတဲ့အချိန်ကျတော့
ထိုးထားတဲ့အရုပ်တွေပါ .. ပိန့်လာရွဲ့လာတော့
နဂါးပုံဆိုလည်း ဘောလုံးများ လေရော့သွားတဲ့ အချိန်လို ရှုံ့တွတွနဲ့
ဘီလူးဆိုလည်း ခုပဲရယ်တော့မလို ငိုတော့မလိုတွေ ဖြစ်ကုန်ကျရော..
ခဏ ခဏတော့ ကြုံးဝါး ဘူးတယ်။ သေရင် ကိုယ့်နောက်ပါမှာ ဒါပဲရှိတယ်လို့..။
Nice ink bro! တံတောင်နောက်အပေါ် က ပုံလေးပြပါအုံး
ဟုတ်ကဲ့ ကြုံရင် နောက် တစ်ခေါက် ပြပါ့မယ်
တက်တူးအကြောင်း ရေးသွားလိုက်ကြတာ စုံနေတာပဲ။
နှင်းသဲဖြူပြောသလို အသားအရေတွေ ရှုံ့လာ ရွဲလာတဲ့အချိန်ကျတော့
ထိုးထားတဲ့အရုပ်တွေပါ .. ပိန့်လာရွဲ့လာတယ်ဆိုတာမျိုး စဉ်းတောင် မစဉ်းစားကြည့်ခဲ့ဖူးဘူး။
ခုခေတ်မှာ တက်တူးကို ပြန်ဖျက်နိုင်တယ်လို့ ပြောသံကြားဖူးတယ်။
ဒါပေမယ့် ဖျက်ရင် ကုန်ကျမယ့်စရိတ်က
မကျ ပါဘူးဆို အဲလူကြီးထိုးထားတဲ့ဟာဆို ငါးသိန်းလောက်ကျမလားမသိ..
ထိုးလဲနာ ဖျက်လဲနာ ..
ယူကျူ့ မှာလေဆာ နဲ့ဖျက်တာတွေ့ဘူးတယ် ၊ အပြင်မှာ တော့မမြင်ဘူး သေးဘူး ။
ကျွန်တော့ အရုပ်က နာရီ နဲ့တွက်ယူတာ ၊ စုစု ပေါင်း ၁၄ နာရီ ဗျာ ။ နောက်ပိုင်း ပြီးခါ နီးတော့ ပိုက်ဆံ လျှော့ယူပါ တယ်။ အဲဒါတောင် တော်တော် ပေးရတယ် ။ ကုန်တာ အသေးစိပ် ထည့် မရေးတာ ကြွား တယ်ထင်မှာစိုးလို့ ပါ
ခုမှ ပုံတွေကို သေချာပြန်ကြည့်မိတယ်..
ဆင်ဆာဖျက်ထားတဲ့နေရာတွေ ပါသဟ ..
ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော် တော့မထိုးခင် မှာအသေအခြာ စဉ်းစား သေးတယ်။ အရမ်း ကြိုက်လွန်း လို့ နောက်ဆက် တွဲ ဆိုးကျိုး တွေ ကိုရင်ဆိုင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး မှထိုးဖြစ်သွား တာပါ
Sep6/ 3:57 pm
ဟားဟား ပန်းသီး က ပန်းသီး
တက်တူး က တက်တူး ပါဗျ
ပန်းသီး တတ်တူး ဟုတ်ပါဘူး
ဆင်ဆာ ရယ်ဟုတ်ပါဘူး၊ ရင်ဘတ် ကြီးပေါ်နေ လို့ ရိုင်းမှာစိုးလို့ ဖျက်လိုက် တာ